မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 03/01/2010 - 04/01/2010
Posted by mabaydar at 11:45 PM6comments :
Posted by mabaydar at 4:48 PM4comments :
လီမင်ဟိုရဲ့ big fan ထဲမှာ ကျမ မပါပင်မဲ့... သူ့ကို အထိုက်အလျောက်တော့ ကြိုက်ပါတယ်... သူ့ကို F4 ကားမဟုတ်ပဲ တခြားကားမှာ ကြည့်ခဲ့ရတာ ဆိုရင်တော့ ပိုကြိုက်မှာပါ... ခုတော့ လီမင်ဟိုရဲ့ နောက်တစ်ကားလာပါပြီ...
ကားနာမည်လေးကတော့ Personal Taste ပါ... နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ Personal Preference လို့ခေါ်ပါတယ်... မင်းသမီးက Sohn Ye-jin (April Snow, A Moment to Remember, summer scent)ကားတွေထဲက မင်းသမီးပါ... အစကတော့ အဲဒိမင်းသမီးကားတော်တော်များများက အေးတိအေးစက်နဲ့ ငိုနေရတတ်တော့ စိတ်ထဲတော့ ဘ၀င်မကျဖြစ်မိပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းနဲ့ ပိုစတာလေးတွေကို တွေ့လိုက်တော့ အတော်ကြည့်ချင်နေမိပါတယ်... ဒီကားကို MBC က ယခုပြနေတဲ့ Still, Marry Me ကားအပြီး March 31 ရက်နေ့မှာ စတင်ထုတ်လွှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်...
ဒါကတော့ အဲဒိ ဇာတ်လမ်းတွဲ Trailer လေးပါ...
အသက် ၃၀၀န်းကျင် Park Kae-in ဟာ ထင်ရှားတဲ့ ဗိသုကာ ဆရာကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ သမီးဖြစ်ပြီး သူမကိုယ်ပိုင် တည်ထောင် ဒီဇိုင်း ထုတ်လုပ်တဲ့ ပရိဘောဂဆိုင်ရှိပါတယ်... သူမဟာ အောင်မြင်တယ်လို့ပြောနိုင်ပင်မဲ့... အမှားတွေကို မကြာခဏလုပ်မိနေတုန်းပါပဲ... အထူးသဖြင့် သူမရဲ့ စိတ်ထားကြောင့် လူတွေကို အလွယ်တကူယုံတတ်တယ်... မကြာခဏ သူမရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အလိမ်ခံရဖန်များလာတဲ့ အခါမှာ သူမဟာ ယောကျာင်္းထက် တိုင်ပင်လို့လဲရမဲ့ Gay Male friend ကို လိုချင်ခဲ့ပါတယ်... အဲဒိ အချိန်မှာပဲ သူမနဲ့ Jin Ho (Lee Min Ho) တို့တွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သူမဟာ Jin Ho ကို အခြောက်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်... ဒီမှာတင်ပဲ သူမဟာ Jin Ho ကို သူမ အခန်းဖော်အဖြစ်အတူနေဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်... Jin Ho အနေနဲ့ လဲ သူတစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် ချစ်မိလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ပုံ့စံကို အတူနေဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာတော့ အနေနီးစပ်ပြီး မသိလိုက်ချိန်မှာပဲ ရင်ထဲက အချစ်တွေက တိုးတိုးလာခဲ့ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ အကြိမ်ကြိမ် အလိမ်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ သူမအတွက် Jin Ho ဟာ အခြောက်မဟုတ်ပဲ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ဆိုတာကို မသိခဲ့လို့ သူမတို့ရဲ့ ပတ်သတ်မှုဟာ အစထဲက စစ်မှန်မှု မရှိခဲ့တဲ့ အခါ....... Source from www.viikii.net & www.dramabeans.com
ကဲ... ခုတစ်လော ဘာကားကြည့်ရမှန်းမသိလို့ ကာတွန်းကားတွေချည်းပဲ ထိုင်ကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ ကျမ အဲဒိကားကို ကြည့်ဖို့တော့ အတော်လေး အားတင်းထားပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ကားက ကိုရီးယားမှာပြ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိုးနဲ့ ရဖို့က တစ်ပတ်နောက်ကျပြီးစောင့်ရအုံးမယ်... ပြီးတော့ တစ်ပတ်ပြီး တစ်ပတ် ဆန့်တငင်ငင် ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ အရသာပျက်ပါတယ်... အဲဒါကြောင့် အားလုံးပြီးခါနီး မှ တစ်ခါတည်း အားလုံးကြည့်ပါမယ်... မသိသေးတဲ့ သူတွေကို ဒီသတင်းလေးဝေငှရင်း ပုံလေးတွေလဲ ဝေငှလိုက်ပါတယ်...
Posted by mabaydar at 10:20 AM5comments :
Posted by mabaydar at 6:00 AM2comments :
P.S ... တပတ်တခါရေးမယ်ဆိုပြီးပြောထားလို့ ခုရေးနေရပြီ... တကယ်ရေးတော့ အတော်ခက်သဗျ... ဘယ်လိုနေလဲတော့ မသိဘူး... ခုတော့ ဒီတစ်ပတ်အတွက် ရေးလိုက်ပြန်ပြီ... နောက်ပိုင်းမှ ခုရေးထားတာတွေကို ကိုက်အောင် ဘယ်လို ဆက်ရေးအုံးမလဲတော့ သိသေးဘူး... I will just go with the flow... အဟီး....
Posted by mabaydar at 10:58 AM3comments :
၀တ္တုဆိုတာကို အစအဆုံးဖတ်ဖူးတာ မနေ့တနေ့ကမှပါ… ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်တိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် တခါတလေ စိတ်ကူးယဉ်ဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ခေါင်းထဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်… ၀တ္တုတစ်ပုဒ်အဖြစ် ချရေးဖို့ကတော့ အလွန်မှခက်လှပါတယ်… တကယ်တမ်းရေးပြီဆိုမှ စကားလုံးထောက်တာနဲ့ သင့်လျှော်တဲ့ နေရာမှာ ဘာစာလုံးသုံးရမှန်းမသေချာတာနဲ့… စာဖတ်သူ မျက်လုံးထဲပေါ်အောင် ဘယ်လို ချပြရပါ့ဆိုတာနဲ့… ငါ့ဝတ္တုက သူများတွေလို အကွန့်အညွန့် စကားလုံးလှလှ မသုံးတတ်လို့ ပျင်းစရာကောင်းမှာနဲ့… မရေးဖြစ် မရေးဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်… အရင်က စမ်းရေးကြည့်ဖူးခဲ့တဲ့ ၀တ္တုတိုလေးတွေကို အားပေးတဲ့သူတွေလဲရှိသလို…. ကျမကို ၀တ္တုတွေဆက်ရေးပါလို့ တိုက်တွန်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စာဖတ်သူတွေလဲရှိပါတယ်… တချို့ဆို ကျမ၀တ္တုမရေးတော့ကတည်းက ကျမဘလော့ကို ရောက်မလာကြတော့တာပါ… ၀တ္တုရေးမယ်ကြံလိုက်… ကိုယ်ကလိုပါသေးတယ် လေ့လာလိုက်ပါအုံးမယ်ဆိုပြီး မရေးလိုက်… စာရေးဆရာတွေရေးတဲ့ ၀တ္တုတွေကို လိုက်ဖတ်လိုက်နဲ့… ရေးတဲ့ စခန်းမရောက်ခဲ့ပါဘူး… ဘယ်ပညာမဆို “စု တု ပြု” ရမယ်လို့ငယ်ငယ်က ဆရာမသင်ခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင်း.. အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းရမယ်… ကိုယ့်ထက်ဆရာကျတဲ့သူတွေဆီက အတုယူ သင်ယူရမယ်… ပြီးရင် ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနဲ့ ပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ… ကျမလဲ သူများရေးတာတွေ လိုက်တော့ဖတ်ပါရဲ့… ဖတ်ပြီးရင် စာရေးဖို့ ပိုပိုသိမ်ငယ်လာတယ်… သူများတွေက ရေးတတ်လိုက်တာ… ငါရေးရင် သူတို့လောက်ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ပြု တဲ့ အဆင့်ကို မရောက်လာတော့ပါဘူး… သူတို့အတိုင်း တိုက်ရိုက်လဲ မကူးချင်ပါဘူး… တကယ်တော့ စာရေးဆရာတိုင်းမှာ သူ့ရေးဟန်နဲ့ သူရှိပါတယ်… တာယာမင်းဝေဆိုတစ်မျိုး… ဂျူးဆိုတစ်မျိုး… ပုညခင်ဆိုတစ်မျိုး… လွန်းထားထားဆို တစ်မျိုးပေါ့… အဲဒိစာရေးဆရာ ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာ စာဖတ်တဲ့သူအတွက်တော့ စာရေးသူရဲ့အရေးအသား ရေးနည်းရေးဟန်ကို ကြိုက်မကြိုက်ပေါ်မှာလဲ မူတည်ပါတယ်… လူများများကြိုက်အောင် ရေးနိုင်တဲ့သူကတော့ စာရေးဆရာကောင်းပေါ့နော်… ခုကျမ ဒီဝတ္တုကို ပထမဆုံး ကြိုးစားပြီး ပုံဖော်ကြည့်တာပါ… ရေးဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းကတော့ ၂ချက်ရှိပါတယ်… ၁ချက်ကတော့ ရှေ့မှာပြောသွားတဲ့အတိုင်း မဗေဒါရဲ့ဝတ္တုကိုမှ စောင့်ဖတ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ… နောက်တစ်ချက်ကတော့ မဗေဒါကို မာတီပလိုင်းက သူငယ်ချင်းတချို့က သူတို့ မဂ္ဂဇင်းမှာ စာမူပို့စေချင်ကြောင်းလာကမ်းလှမ်းတဲ့အတွက် ကြိုးစားပြီးရေးကြည့်တဲ့သဘောပါ…
အစကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းအကုန်ရေးပြီမှ ဘလော့ပေါ်တင်မလို့ပါပဲ… ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းက ဘယ်တော့ပြီးမလဲ ကျမကိုယ်တိုင်လဲ မသိပါဘူး… နောက်က တွန်းအားမရှိရင်လဲ ကျမကိုယ်တိုင်လဲ နေ့ရွှေ့ညရွှေ့နဲ့ ရေးဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး… ခုတောင် ၁မျက်နှာရေးပြီး ဆက်မရေးဖြစ်တာ ၃လလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်… ခုတော့ ပြီးသလောက်နဲ့ တီဗွီက ကိုရီးယားကားပြသလို ၁ပတ်မှာ ၁ပိုင်းတင်ပေးဖို့ စဉ်းစားမိပါတယ်… အားလုံးပြီးရင်တော့ အကုန်လုံးကို စုစည်းပြီး ebook လိုမျိုးလုပ်ထားပေးပါ့မယ်… ခုလောလောဆယ်တော့ ဒီဇာတ်လမ်း ဇာတ်သိမ်းကို အကြမ်းပျင်း စဉ်းစားပြီးပင်မဲ့… အလည်မှာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ သေသေချာချာမစဉ်းစားရသေးပဲ ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာကာ ချရေးလိုက်မိပြန်ပါပြီ… ပထမဆုံးရေးတာမို့ လိုတာ ပိုတာရှိရင် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့... မဗေဒါရဲ့ ၀တ္တုဇာတ်လမ်းကို နှစ်သက်သဘောကျ အားပေးတယ်ဆိုရင် မဗေဒါနောက်ဆက်လှမ်းမဲ့ ခြေလှမ်းတွေမှာ မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာမှာ အမှန်ပါပဲ…
Posted by mabaydar at 9:41 AM 8 comments :